HMS Bounty ပုံတူ FSX & P3D
downloads ရယူရန္ 19 022
11 / 01 / 2019 အပေါ်နောက်ဆုံးရေးသားချိန် : နယူးဗားရှင်း 2.0 ဇာတိ FSX နှင့်သဟဇာတ Prepar3D v4 ။ မှတ်ချက်: အ HMS Bounty အလုပ်လုပ်ဘို့မလိုအပ်ပါ FSUIPC ။ အဘို့အပါဝင်သည် 64-bit မှာကုဒ် P3DV4 + အသုံးပြုသူများသည်
HMS Bounty 18th ရာစုမြင့်သင်္ဘောစတုရန်း rigger လုံးဝလေတိုက်-မောင်းနှင်, တစ်ဦးချင်းစီကာတွန်းကားများနှင့်ထိန်းချုပ်ထားရှ, ဦးတည်ချက်နှင့်လေတိုက်နှုန်းနှင့်အတူကာတွန်းအလံ, ကာတွန်းပဲ့များနှင့်ရွက်စီမံခန့်ခွဲမှု Window အားလုံးသင်္ဘောလုပ်ငန်းဆောင်တာကိုထိန်းချုပ်။ သင်္ဘော Yaw, ကီးလင်နှင့်တပ်ဖြန့်ရွက်နှင့်ခြံထဲမှာလက်မောင်းရာထူးပေါ် မူတည်. အစေးနှင့်အတူအမြန်နှုန်းနှင့်ဦးတည်ချက်လေတုံ့ပြန်မှု။ ambient အသံ, variable ကိုလေတိုက်ခြင်းနှင့် gale မုန်တိုင်းအသံ, သင်္ဘောရဲ့ခေါင်းလောင်း, "နှုတ်ဆက်" ကျောက်ဆူးအလေးချိန် / အပေါငျးတို့သနှစ်မြှုပ်ခြင်းမှ add drop ။
အထူးသတိပေးချက်: သင်၏တွင်တည်ရှိသည်သောစာရွက်စာတမ်းများကိုဖတ်ပါ "HMS Bounty Replica.pdf" စာရွက်စာတမ်းများ လှေကိုထိန်းချုပ်ဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူဖို့ "Windows ကို" ၏။
မှတ်ချက်: realist တို့အမြင်တစေ့တစောင်း setting များကိုအကောင်းဆုံးလေအကျိုးသက်ရောက်မှုအတွက် "ခက်" (ထဲမှာ "လွယ်ကူသော" သရုပ်မှန်ပေါ်အလုပ်လုပ်မည်မဟုတ်ဟုသတ်မှတ်ရပါမည် FSX.)
လည်း HM လက်နက်ကိုင်သင်္ဘော်ကြဲအဖြစ်လူသိများ HMS ်ကြဲ, တစ်ဦးရုက္ခဗေဒမစ်ရှင်များအတွက်တော်ဝင်ရေတပ်ကဝယ်ယူသေးငယ်တဲ့ကုန်သည်သောအိုးခဲ့သည်။ အဆိုပါသင်္ဘောကိုဝီလျံ Bligh ၏ command ကိုအောက်မှာ, breadfruit အပင်ဆည်းပူးနဲ့အနောက်အင်ဒီးဗြိတိသျှဥစ္စာမှသူတို့ကိုပို့ဆောင်ရန်ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာကိုစေလွှတ်ခဲ့သည်။ ဒါကမစ်ရှင်, ခေတ္တဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးမန်ယူခရစ်ယာန်များကဦးဆောင်သည့်စိတ်ရင်းကြောင့်ပြီးစီးခဲ့ဘယ်တော့မှခဲ့သည်။ ဒါကကရုဏာအပေါ်နာမည်ကြီးစိတ်ရင်းခဲ့သည်။
Author: မီလ်တန် Shupe, Nigel Richards, ရော့ Barendregt, ဆာရှာ Rieger နှင့်ရော့ Ibey